यस्तो छ, स्वस्थ र सन्तुलीत भोजनको सूत्र - Bidur Khabar
यस्तो छ, स्वस्थ र सन्तुलीत भोजनको सूत्र
विदुर खबर २०७४ फागुन २३ गते १०:४५
के तपाईलाई थाहा छ ? मार्च महिना पोषणको हो ? लौरी फेनालीले नभन्दासम्म मलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन । के खाने, कसरी खाने, कति खाने ? यसबारेमा हामीले जान्नैपर्दोरहेछ ।
जति उमेर ढल्कदै जान्छ, शरीरलाई उति सन्तुलित आहार चाहिन्छ । हुन त हामी टिभी अगाडी बसेर पेस्ट्री या पपकर्न खाइरहेका हुन्छौं । चिप्स चबाइरहेका हुन्छौं । ख्याल राख्नुस्, यस्तो बानी स्वास्थ्यका लागि हितकर छैन । शरीरलाई स्वस्थ तथा तन्दरुस्त राख्न हामीलाई सन्तुलित तथा पोषणतत्वयुक्त आहार नै चाहिन्छ । दैनिक भोजनमा पोषणतत्व भएन भने त्यसको कमीले हामी विरामी हुनसक्छौं ।
चिल्लो र नुन घटाउँ
दैनिक आहारमा फलफुल तथा तरकारी हुनैपर्छ । दिनको एउटा कुनै न कुनै फलफुल खानुपर्छ । शरीरलाई आवश्यक प्रोटिनका लागि सामुदि्रक खाना, केस्रायुक्त मासु, माछा, बदाम तथा गेडागुडी खान सकिन्छ । हो, यस्ता खानेकुरा रोज्दा कम क्यालोरी भएको रोज्नुपर्छ । चिल्लो र नुन बढी नहोस् । सोडियमको मात्रा कम भएका खानेकुरामा जोड गर्नुपर्छ ।
क्यालोरी तथा फ्याटको मात्रा कम भएका खानेकुरा खोज्न मलाई खासै समस्या पर्दैन । तर सोडियमको मात्रा कम भएका खानेकुरा खोज्न चाहिँ निकै समस्या हुन्छ । तपाईहरुले बजारमा सामान किन्दा कहिल्यै त्यसमा टाँसिएको लेवलमा ध्यान दिनु भएको छ ? ति मात्रामा सोडियमबारे कँहीकतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । यदी कुनै खानेकुरामा सोडियमको सन्तुलीत मात्रा उल्लेख गरिएको पाउनुभयो भने चाहिँ ती खानेकुरा तुरुन्तै किनिहाल्नुस् ।
चिकित्सकका अनुसार अधिक मात्रामा सोडियम फाइदाजनक मानिदैन । उच्च रक्तचाप तथा मुट सम्बन्धि समस्या भएका मानिसका लागि त यो झनै राम्रो मानिदैन । यहीकारण जंकफुड र फास्टफुडजस्ता नुनको मात्रा अधिक भएका खानेकुराबाट टाढै रहनु नै बेस ।
मिल्क कफीको मजा लिउँ
अमेरिकास्थित एकेडेमी अफ न्युटि्रसन तथा डायटिटिक्सका अनुसार हाम्रो शरीरलाई सन्तुलित मात्रामा क्याफिन पनि चाहिन्छ । मुट सम्बन्धि समस्या, टाइप २ मधुमेह, पार्किन्सन्स तथा केही क्यान्सर सम्बन्धि रोगमा क्याफीन फाइदाजनक मानिन्छ ।
पर्याप्त मात्रामा दूध हालेको कफी पिउने हो भने शरीरमा क्याल्सियम तथा भिटामिन डीको पुर्ति हुनेसमेत एकेडेमीले जनाएको छ । यद्यपी, बुढाबुढी तथा उच्च रक्तचाप भएका मानिसका लागि क्याफीन त्यति हितकर नभएको एकेडेमीको सल्लाह छ ।
क्यान डिब्बामा प्याक गरिएका फलफुल तथा तरकारी पनि पोषणतत्वका श्रोत हुन् । एकेडेमीका अनुसार सही तरीकाले प्याक गरिएका र ब्याक्टेरियारहित ताजा फलफुल तथा तरकारी स्वास्थकर मानिन्छ । त्यसैले त म पनि यस्ता खानेकुरालाई विशेष प्राथमिकता दिने गर्छु ।
रेशादार खानामा जोड दिउँ
रेशादार अर्थात फाइबरयुक्त खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि उत्तम मानिन्छ । अमेरिकी उपभोक्ता मञ्चका अनुसार एभोकार्डो, हरियो मटर, बदाम, शंकरखण्ड, मकैमा फाइबरको मात्रा अत्याधिक हुन्छ । यस्ता खानालाई हामीले नियमित भोजनमा सकेसम्म जोड दिनुपर्छ ।
एक्लै बस्ने तथा आफै पकाउनेहरुका लागि गार्‍हो हुनसक्ला, तर जाँगर निकालेर भए पनि फलफुल, हरिया साजसब्जी, प्रोटिन तथा चिल्लोरहित दूधका परिकार खान नछुटाउनुस् । जाँड रक्सीको कुलत छुटाउन पनि यस्ता रेशादार खानेकुरा आवश्यक छ ।
र, मासु उमालेर है
मलाई थाहा छ, कयौ मानिस कुखुरा तथा टर्की पनि खाइरहेका हुन्छन् । मासु तारेर या डिप प|mाइ गरेर भन्दा उसीनेर खानु लाभदायक छ । उसिनेको मासुले स्वास्थ्यमा कम असर गर्ने भएकाले बार्बिक्यू गर्नुअघि मासुलाई मजाले उसिनेको हुनुपर्छ ।